Iyi ndiyo iPhone SE iyo Apple yaifanirwa kunge yakaburitsa | IPhone nhau
Apple payakaunza iyo iPhone SE Musi waKurume 21, vashandisi vazhinji vakafunga kuti chishandiso chekutarisa nekuti chine zvikamu zveiyo iPhone 6s pamutengo wakaderera kwazvo. Iyo nyowani 4-inch iPhone yakamiswa seimwe yeakanakisa epakati-renji pamusika, asi ine dambudziko riri pachena: dhizaini yayo yakafanana neiyo yeiyo iPhone 5 / 5s, yekutanga yakatangwa muna 2012.
Sezvavanotiratidza mukati Computer Bild, kune akawanda akakosha kesi anogona kuiswa pamusoro peiyo iPhone SE kuti aisiye inoshanda zvakafanana neiyo iPhone 6s. Kuti uwane icho, iwe unongofanirwa kutsvaga mune chitoro senge Aliexpress (senge IZVI) uye sarudza imwe yesarudzo dziripo. Ehezve, sezvaungaona muvhidhiyo, kukwirisa rudzi urwu rweimba kana "dzimba" unofanirwa kubvarura chishandiso, saka hazvikoshe kana isu tisiri handymen vanodzora mhando iyi yekugadzirisa kana kugadzirisa.
Chinja yako iPhone 5, iPhone 5s kana iPhone SE ive iPhone 6s
Chinhu chakanaka pamusoro peiyo iPhone SE ichigovana dhizaini neaviri eatatu aripo maPhones ane iyo mashanu manhamba ndeyekuti izvo zvishongedzo zvemhando yapfuura zvinoshandawo kune yazvino modhi. Kune rumwe rutivi, tichawana zvakawanda zvekushandisa; kune rimwe racho, kana tichine iPhone 5 tinogona kuipfekedza se "iPhone 6SE" neimwe yeaya akakosha machira, ayo aigona kupa 2012-2013 smartphone a 2015-2016 dhizaini.
Ehezve, sekutarisirwa, mufananidzo hauzove wakanyatsofanana. Inogona kuonekwa nyore nyore kubva pamufananidzo uri pamusoro kuti iyo maburi eMheni yekubatanidza uye 3.5mm chiteshi nekuti mahedhifoni haana kukwana senge dhizaini yepakutanga, asi ndiani achange achiteerera kune izvi zvakawanda kwazvo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone SE » Iyi ndiyo iPhone SE iyo Apple ingadai yakaburitsa (uye iwe unogona kuzviita iwe)
Manheru akanaka Pablo, iyo iPhone SE inouya neshanduro 9.3 (13E233)
Iwe unogona kundiudza kana zviri nyore kugadzirisa kana kudzoreredza ku9.3.1,
kana kuisiya iri 9.3 iyo yawakaisa.
Hi Jon. Hapana chinoitika kana iwe uchigadzirisa, asi kana uchikwanisa, zvakanak kudzorera ne iTunes. Saka iwe unotanga kubva pakutanga uye sezvo iwe uchangobva kuzvitenga, iwe unenge uine chisina chinhu.
Ndatenda Pablo, ndanga ndichikuudza nekuti ... maBhaibheri matsva anobuda sei, ini handizive kana kuisa izvi uye kunzwa zvirevo kune dzimwe iPhones zvekuti kana imwe ikatadza ... imwe inoenda zvakanaka ... nezvimwe. yechengetedzo yekuti inoenda zvakanyanya kupfuura neshanduro inounza, saka sezvo iwe wakaburitsawo kuti vakatoburitsa beta ye9.3.2, wozomirira kana vhezheni iyi yadzikama? ndosaka ndakabvunza mafungiro ako Ndatenda
Ndine 9.3.1 uye inoshanda mushe. 9.3 ndiyo yaive nematambudziko. Siri yakagadziriswa kure, yakanga isiri kubva kuIOS 9.3.1.
Sei uchida kugadzirisa? Siya zvakadaro sezvazviri, usatsvage kunetseka. Chinhu chakanakisa chaungaite kuisiya iine yepakutanga vhezheni yeiyo ios yawakaunza. Kana ichishanda, usachinje!
Iwe unofanirwa kuve wakanyanya, wakashata padenga kuti uite njodzi yakadaro uye otomatiki kupererwa nekashoma garandi, yakasimba sei.
Pindura kuna elisha
Iyo iPhone SE yakakwana sezvazviri. Iyo mitsetse yakatwasuka yeantena pane iyo nyowani iPhones inotaridzika inotyisa kwandiri.
zvakaitwa naApple ndizvo zvataida, kugadzirisa ma5 uye kuisiya iine dhizaini imwechete iyo inoshamisa!
Matafura eApple Campus 2 achave "Pods" e5.5m